काठमाडाैं | पुस १७, २०७८
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवम् वरिष्ठ साहित्यकार गोपी मैनालीको निबन्ध संग्रह 'घाउ आफैंलाई दुख्छ' विमोचन गरिएको छ ।
शनिवार सुरभि साहित्य प्रतिष्ठानले काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी निबन्ध संग्रह लोकार्पण गरेको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् इतिहासविद् दिनेशराज पन्तले पुस्तकको लोकार्पण गरे ।
पुस्तकको समीक्षा गर्दै वरिष्ठ पत्रकार एवम् साहित्यकार विजय चालिसेले पुस्तकका लेखक मैनाली सरकारी क्षेत्रमा मात्रै नभई साहित्य क्षेत्रमा समेत अब्बल रहेको पाइएको बताए । बौद्धिकतालाई कलात्मक भाषामा ढाली विचारसमेत स्पष्ट पार्न सक्ने खुबी उनको कलममा रहेको चालिसेले बताए ।
प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुईटेलले पुस्तकको समीक्षा गर्दै साहित्यप्रति पूर्ण लगाव भएका कमै प्रशासकहरूमध्ये लेखक मैनाली एक भएको बताए ।
उनले भने, 'पूर्वाग्रह नराखी तटस्थ हेर्ने हो भने उहाँले लेखनमा निकै धेरै लेख्नुभएको छ, ती सबै अब्बल छन् ।'
लेखक मैनालीले आफ्ना लेखाइमा लेखकीय पहिचान बनाएको उनले प्रतिक्रिया दिए । उनले कृतिमा कतिपय शब्द निकै जटिल रहे पनि यो गहन बौद्धिकता भएको टिप्पणी गरे ।
संग्रहमा लेखक मैनालीले 'मनको वह बाट उम्किन खोज्नेहरूप्रति !' समर्पण गरेका छन् । प्रा.डा. लुईंटेलले यो पुस्तक अहिलेको निकै उत्कृष्ट निबन्ध संग्रह भएको टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा लेखकीय मन्तव्य राख्दै पुस्तकका लेखक मैनालीले निबन्धमा आफूले लेखेको पुस्तकमा सबैको भावना समेट्ने प्रयास गरेको बताए ।
'मैले निबन्ध संग्रहमा उन्मुक्त भएर मेरा कुनै परिवेशका घटना उठाएको छु । तर त्यो मेरो मात्र हैन सबैको हो,' उनले भने।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवम् इतिहासविद् दिनेशराज पन्तले मैनाली सत्यप्रति उन्मुख व्यक्ति भएको बताए । उनले भने,'मैनालीज्यू सत्यप्रति उन्मुख मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको लेखनमा पनि त्यो शक्ति झल्किन्छ ।'
मैनालीको लेखाइ सलल बगेको र पढ्दा आनन्द आउने प्रकृतिको भएको उनले बताए । उनले भने, 'पुस्तक पढ्दा आनन्द आउँछ भने धेरै नै सूचना तथा जानकारीमूलक पनि छ ।'
पन्तले पुस्तक भोलिको नेपालको शैक्षिक, प्रशासनिक इतिहासमा दस्तावेज हुने समेत उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा पूर्व प्रशासक विमल कोइराला, प्रा.डा. तुलप्रसाद कोइराला, प्रा.डा. खेम कोइराला बन्धु, लीला लुइँटेललगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवम् कार्यक्रमका सभापति बाजुराम पौडेलले मैनालीको पुस्तक निकै उत्कृष्ट रहेको र यसलाई सार्वजनिक गर्न पाउनु गर्वको कुरा भएको बताए । यसअघि मैनालीका ४ वटा पुस्तक प्रकाशित छन् भने अन्य फुटकर रचनाहरू प्रकाशित छन् ।
शनिवार सार्वजनिक निबन्ध संग्रह सन्तोषी माता सञ्चार प्रालिले प्रकाशन गरेको हो । पुस्तकको मूल्य ४०० रूपैयाँ राखिएको छ ।
छ प्यार देशको (कविता)
अर्जुन दुलाल हिमाल यो पहाड यो मधेस एक सान हो किराँत हिन्दु कृश्चियन् सबै समान हो हसाउँदै म हाँस्दछु भुलेर भेदभाव त्यो छ देश बग्छ रक्तमा म प्यार गर्छु देशको ।।१।। फुटेर लर्नु छैन हे अनेक जात धर्म...